सन्तानको उचित पालनपोषण कसरी गर्ने ? यी हुन् अभिभावकलाई १० टिप्स « Mero LifeStyle
१. बच्चा तपाईंको निम्ति सौभाग्य हो
२. उनीहरू जे बन्न चाहन्छन्, त्यही बन्न दिनुहोस्
३. साँचो माया दिनुहोस, जे चीज माग्यो त्यही होइन
४. बच्चाहरूलाई ठूलो बनाउन हतार नगर्नुहोस्
५. यो सिक्ने बेला हो, न कि सिकाउने
६. बच्चाहरू स्वाभाविक रूपमा आध्यात्मिक हुन्छन्
७. प्रेम र सहाराले भरिएको वातावरण बनाउनुहोस्
८. बच्चालाई आफ्नो साथी बनाउनुहोस्
९. मान-प्रतिष्ठा नखोज्नुहोस्
१०. बच्चाको आकर्षणको केन्द्र बन्नुहोस्